13 Meyi - 26 Meyi 2016 (IsiZulu)
13 Meyi - 26 Meyi 2016 Iphephandaba lakho laMAHHALA www.durban.gov.za
CHARMEL PAYET ITHEKU selikufeze konke okubalulekile ngokwakhiwa kwesikhungo sezemidlalo eDolobheni esizokuba nendawo yebhola lezinyawo esezingeni eliphezulu. Ukuxoxisana nomphakathi kwezinsuku ezingu-30 okwenziwa nguMkhandlu ngo-2015 sekusemapethelweni. Le ndawo okuzokwakhiwa kuyo ingase Moses Mabhida Stadium maqondana ne neGrowthpoint Kings Park. Umbiko omayelana nokuthi sekuhanjwe ibanga elingakanani wethulwe
THEMBA KHUMALO IMEYA yeTheku uJames Nxumalo ithembisa ukuthi izosiza imindeni emine elahlekelwe ngamalungu ayo ngenxa yezikhukhula ezidalwe yizimvula ezinamandla ezikhahlameze iDolobha ngempelasonto yomhlaka 7-8 Meyi 2016. UNxumalo utshele le mindeni ngenkathi eyivakashele mhlaka 11 Meyi 2016 lapho ebehambele izindawo ezikhahlamezeke kakhulu ngenxa yezikhukhula. UNxumalo ube esethi uMasipala uzobaxhasa ngezimali ukuqinisekisa ukuthi bayakwazi ukungcwaba ngesizotha. UNxumalo uvakashele kulezi zindawo ehambisana nePhini lakhe uNomvuzo Shabalala, uSihlalo weKomidi lakwa- Governance and Human Resources uNondumiso Cele, amaKhansela, abasebenzi beDolobha nabesiFundazwe ukuyobheka ukuthi sekuhanjwe ibanga elingakanani ukusiza imindeni ehlukumezekile. Izindawo ezihanjeliwe kubalwa kuzo iBottlebush eChartsworth, lapho kushone u-Emmanuel Zangwa oneminyaka emihlanu emuva kokuba umjondolo uwele kuye. Abesifazane ababili bamuke nomfula endaweni eseduze neBottlebrush. UBabhekile Miya oshonelwe ngudadewabo, uNomvula Miya oneminyaka engu- 28, usincomile isenzo sikaMasipala. ?Ngifisa ukubonga iMeya neKhansela lethu ngokuzosibona namhlanje siwumndeni. Lokhu kukhombisa ukuthi asisodwa nokuthi bayasinakekela,? kusho uMiya. UNxumalo uphinde wavakashela naseMlazi kuWadi 88 lapho izimvula zidlule nomphefumulo wengane. UNxumalo uthe ithimba lakwa-Disaster Management, imiNyango ehlukene yesiFundazwe nekaMasipala, izinhlangano ezingekho phansi kukahulumeni bazosebenzisana ukusiza imindeni ekhahlamezekile. UNxumalo uthe bane abantu osekuqinisekisiwe ukuthi bashonile, abadala ababili nezingane ezimbili. ?Amaphoyisa asathungatha isidumbu somuntu wesifazane oneminyaka engu-40 nengane yakhe eneminyaka emine okukholakala ukuthi bamuke nomhosha.? UNxumalo uthe abantu abangaphezu kuka-500 abanandawo
yokuhlala abahlala emahholo omphakathi okwesikhashana. UNxumalo uthe iKomidi eliPhezulu licele kwenziwe ucwaningo lokubheka ukuthi yimiphi imijondolo eyakhiwe eduze nemifula. themba.khumalo@durban.gov.za
CHARMEL PAYET ITHEKU lizoqeqesha intsha engu-10 000 eminyakeni engu-3 ezayo. Lo mbiko wethulwe phambi kweKomidi eliPhezulu ngenkathi kuboniswa ikomidi ngenqubekela phambili mayelana ne- Artisan Development Project njengokwesinqumo soMkhandlu sangomhlaka 24 Febhuwari 2016. Le phrojekthi kulindeleke ukuba idle imali enguR742.1 million okubalwa kuyo imali yokufunda, umhlomulo wenyanga, ukuphathwa kwempahla nephrojekthi. I-Academy isazohlangana nezikhungo zaseThekwini. Intsha izoqeqeshelwa le mikhakha elandelayo: ukukhanda izinjini zikadiesel nezika-petrol, ukushisela, ukufaka nokukhanda ugesi. Zikhona nezinye izinhlelo zamazinga aphansi ezingadingi imaki elikhulu. Kuzokhishwa izikhangiso emaphepheni uma sekudingakala abantu. Izicelo kumele zishiwe kuzo zonke izikhungo zeSizakala, imitapo yolwazi namahhovisi kaMasipala. Le phrojekthi sizoyenza ihambisane noHlelo lokuQasha ngokuLingana okusho ukuthi u-60 phesenti kuzoba ngabantu besifazane. charmel.payet@durban.gov.za
Kuzoqeqeshwa intsha engu-10 000 engasebenzi
phambi koMhlangano woMkhandlu mhlaka 4 Meyi 2016. Lo mbiko uyakuqinisekisa ukuthi konke sekumi ngomumo. Le phrojekthi izokwakhiwa ngokubambisana nguHulumeni wesiFundazwe, uMasipala weTheku, iHoy Park Management Pty Ltd kanye neNhlangano yezemiDlalo eNingizimu Afrika. charmel.payet@durban.gov.za Umfanekiso wesikhungo sezemidlalo esizokwakhiwa eDolobheni. ESINGAPHEZULU: IMeya yeTheku uJames Nxumalo nelungu lesigungu esiphezulu seTheku uKhansela Nondumiso Cele beduduza uBabhekile Miya oshonelwe udadewabo. ECELENI: IMeya uNxumalo ibheka umonakalo la kushone khona ingane ineminyaka emihlanu emuva kwezikhukhula. Izithmbe: THEMBA KHUMALO
IZIKHUNGO ZOKUSHAYELA ETHEKWINI
Imibono: Ikhasi 4 Izindaba: Ikhasi 3
SISABHOKILE ISOMISO E-KZN